China igwe akụkụ Manufacturer na Supplier | Meste
Machined akụkụmejupụtara ihe ndị bụ isi nke ngwaọrụ dị iche iche na akụrụngwa. Akụrụngwa na usoro eji ya jikọtara ọkwa kachasị elu nke imepụta igwe ugbu a, akụrụngwa, gbazee, akụrụngwa, eletrọniki, njikwa ụlọ ọrụ na mpaghara ndị ọzọ.
Na mmepe nke nkà na ụzụ, nkenke akụkụ na machining arụ na-esiwanye mkpa ọrụ na oge a na ulo oru n'ichepụta. MESTECH anọwo na-enye ndị ahịa nhazi nke ọla na akụkụ na-abụghị nke igwe kemgbe ọtụtụ afọ.
Kedu ihe bụ akụkụ nke akụkụ mbenka ahaziri arụ na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ?
Ngwaọrụ igwe bụ “Industrial nne igwe” . Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ọrụ akụrụngwa niile enweghị ike ịkewa site na nhazi igwe. Site na mmụba nke teknụzụ na akụrụngwa na-aga n'ihu, enwere nnukwu ọchịchọ maka akụkụ ziri ezi, dị ka ụgbọelu, ụgbọelu, ụgbọ ala, ahụike, ọgụgụ isi na imepụta mgbawa, ha niile bụ ndị na-enweghị ike ịhapụ site na nkwado nke akụkụ ziri ezi. Etu ị ga - esi nweta nrụpụta dị elu na ọnụ ala dị ọnụ ala nke akụkụ nkenke bụ ihe gbasara ụlọ ọrụ nrụpụta igwe.
High nkenke akụkụ
Olee otú ọtụtụ ụdị nke machining usoro ị maara?
Nkenke machining bụ usoro nke na-agbanwe size ma ọ bụ arụmọrụ nke a workpiece site na igwe nhazi. Dabere na ọnọdụ ọnọdụ okpomọkụ nke arụ ọrụ a na-arụ ọrụ, enwere ike kewaa ya na nhazi oyi, nhazi ọkụ na nhazi pụrụ iche. A na-arụkarị ya na okpomọkụ ụlọ ma ọ dịghị akpata kemịkal ma ọ bụ mgbanwe anụ ahụ nke ihe ọkụkụ. A na-akpọ ya nhazi oyi. N'ozuzu, nhazi na ma ọ bụ n'okpuru okpomọkụ nkịtị ga-eme ka kemịkal ma ọ bụ mgbanwe anụ ahụ nke arụ ọrụ, nke a na-akpọ nhazi ọkụ. Enwere ike kewaa nhazi oyi n'ime igbutu na nhazi nrụgide dịka ọdịiche nke usoro nhazi. Nlekọta ọkụ, ịkwa akwa, nkedo na ịgbado ọkụ na-adịkarị na arụ ọrụ ọkụ. Nkenke nkenke na-abụkarị usoro nhazi ikpeazụ iji hụ na izi ezi nke akụkụ, ọ bụkwa njikọ ya na nnukwu ọrụ, na-arụ karịa 60% nke nhazi nke akụkụ igwe.
Gịnị bụ nkenke n'ibu tingcha?
Mechanical Cutting bụ isi ụzọ nke n'ibu nhazi, na-ezo aka usoro nke wepụ ihe site kpọmkwem machining.
Nkenke n'ibu ọnwụ bụ ụdị nke igwe nhazi na oke nkenke. E nwere ụzọ abụọ dị mkpa iji ghọta nkenke nkenke nke akụkụ:
(1) Otu bụ iji ngwa ọrụ dị oke mkpa iji hazie akụkụ ndị dị oke nkenke, dị ka igwe na-agwụ ike, ihe na-ehicha eriri, ikpuru ikpuru, griin grinder, ngwa nyocha anya, nkenke mpempe akwụkwọ mpụga, nnukwu nkenke hob grinder, elu -nkezi eri lathe, wdg. Igwe akụrụngwa ndị a bụ ezigbo ngwa ọrụ pụrụ iche, nke a na-eji rụọ ọrụ nke otu akụkụ nke akụkụ, dị ka gia, turbines, ịghasa, ịcha ngwaọrụ, nkenke nnyefe nnyefe na igbe injin, wdg ndị a igwe ngwaọrụ ndị ukwuu oru oma na ezi na nhazi pụrụ iche nzube.
(2) Nke abụọ bụ iji teknụzụ akwụ ụgwọ mmezi iji melite nhazi nhazi nke akụkụ. Isi exponential akara igwe ngwaọrụ bụ CNC igwe, CNC lathe, CNC grinder, CNC-agwụ ike na-egwe ọka igwe, na compound machining center.
CNC igwe ngwaọrụ n'ozuzu ha n'ozuzu nzube igwe ngwaọrụ, n'ihi na ojiji nke na kọmputa mmemme technology, nwere ike-eme ndokwa na kọmputa ịme anwansị nhazi na debugging, nwere ezigbo ndakọrịta na mgbanwe, kwesịrị ekwesị maka mgbagwoju udi, ọtụtụ akụkụ nhazi. Ngwaọrụ CNC dị oke ọnụ, mana ha nwere ike ịchọpụta akpaaka nke nhazi, ma nwee usoro nhazi oge niile na arụmọrụ arụmọrụ.
Kedu otu esi ahọrọ ngwa nhazi kwesịrị ekwesị?
Site na mmepe nke teknụzụ njikwa kọmputa, a na-ejikọ ọtụtụ ngwa igwe na usoro CNC, iji ghọta akpaaka nke nhazi, zere njehie ọrụ ntuziaka, ma melite nhazi na nkwụsi ike. Ya mere, CNC igwe ngwaọrụ na-n'ọtụtụ ebe na ubi nke nkenke akụkụ n'ichepụta.
(1) CNC nhazi nkenke nke ezi metal aro dị elu, na mụ nhazi àgwà;
(2) O nwere ike mepụta multi-ahazi linkage na hazie akụkụ na-eme aghara aghara.
(3) Mgbe a gbanwere akụkụ CNC nke ezigbo ngwaike, ọ bụ naanị usoro NC ka a ga-agbanwe iji chekwaa oge nkwadebe mmepụta.
(4) Akụrụngwa akụrụngwa n'onwe ya nwere oke nkenke na nkwụsi ike, ma nwee ike ịhọrọ ọnụọgụ nhazi bara uru, na ọnụego mmepụta dị elu (n'ozuzu 3 ruo 5 nke nke igwe akụrụngwa izugbe).
(5) Ngwaọrụ igwe na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ike belata ike ọrụ.
CNC nhazi dị mma site na iji ngwaọrụ mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ bụ akụkụ bụ isi nke ezigbo ngwaike. Short cutters can significantly belata ngwá ọrụ ndiiche, wee nweta magburu onwe elu mma, zere rework, belata ojiji nke ịgbado ọkụ mkpara, na-ebelata EDM nhazi oge. Mgbe ị na-atụle ịkpụzi ahịrị ise ahụ, ọ dị mkpa ịtụle ụkpụrụ nke iji nhazi axis ise anwụ: iji mezue nhazi ọrụ ọfụma na obere ihe mkpụmkpụ dị ka o kwere mee, kamakwa iji belata mmemme, ịpịkọta na oge nhazi. iji nweta ọdịdị zuru oke zuru oke.
Olee otú iji mee ezi uche nhazi technology?
(1) ike ike nhazi ogbo. Iji bipụ ọtụtụ ego nhazi nke nhazi ọ bụla ma mepụta akara ngosi ziri ezi, ihe kachasị mkpa bụ imeziwanye arụ ọrụ dị ka o kwere mee.
(2) Ọgwụgwụ nke ọkara. Wepu ihe ndi ozo nwere ike ime mgbe emechara ihe ike, kwadebe maka imecha odidi, choro iru nhazi achọrọ achọrọ, jide n'aka na o kwesiri imecha ya, ma mechaa nhazi nke ozo.
(3) Oge ngwụcha. N'oge a, a na-ahọrọ oke ọsọ ọsọ, obere nri na oke omimi iji wepụ ihe nkwụcha ụgwọ nke usoro gara aga hapụrụ iji mee ka ọdịdị nke akụkụ ahụ zute ihe teknụzụ nke eserese ahụ.
(4) Ultrafine machining ogbo. A na-ejikarị ya eme ihe iji belata uru nke oke ike ma ọ bụ iji wusi ọdịdị nhazi. A na-ejikarị ya eme ihe maka nhazi nhazi ya na ihe dị elu nke oke iwe (ra <0.32 um).
(5) Ultra-mma nhazi ogbo. Igwe ihe nkenke ziri ezi bụ micron 0.1-0.01 na oke ike RA na-erughị 0.001 micron. Processingzọ nhazi ndị bụ isi bụ: ịcha mma, egweri enyo, egweri na polishing.
Kedu otu esi ahọrọ ihe kwesịrị ekwesị maka ihe eji arụ ọrụ?
Nhazi nkenke, ọ bụghị ihe niile nwere ike ịchọrọ ịrụ ọrụ nhazi, ụfọdụ akụrụngwa siri ike, karịa ike nke akụkụ igwe na-arụ ọrụ, nwere ike ịdaba akụkụ akụrụngwa, yabụ akụrụngwa ndị a anaghị adabara maka nhazi nhazi, belụsọ ma emere ya ka ihe puru iche, ma obu ikucha laser.
Enwere ike ịkekọrịta ngwaọrụ maka nkenke ngwa ngwa ụzọ abụọ, ihe eji igwe na ihe ndị na-abụghị ọla.
Banyere ihe ndị e ji ígwè mee, ihe siri ike nke nchara nchara dị elu, na-esote ígwè nkedo, na-esote ọla kọpa na nke dị nro dị nro.
Nhazi nke ceramik na plastik bu nke nhazi nke ihe ndi na-abughi nke nwere ike.
1. Nke mbụ, akụkụ ahụ ga-enwerịrị oke ike. Maka ụfọdụ ngwa, ka ịdị elu nke ihe dị elu dị elu, ọ ka mma. Ọ na-ejedebe na ihe siri ike chọrọ nke akụkụ ndị a rụpụtara. Ngwa ndị a haziri ahazi esighi ike. Ọ bụrụ na ha siri ike karịa akụkụ ndị na-arụ ọrụ, ha enweghị ike ịhazi ya.
2. Nke abuo, ihe omuma adighi ike na nro. Ma ọ dịkarịa ala otu larịị nke ike ike dị ala karịa nke akụkụ igwe. N'otu oge ahụ, ọ dabere na ọrụ nke ngwaọrụ ndị a haziri ahazi na nhọta ziri ezi nke ihe maka akụkụ igwe.
Na nkenke, a ka nwere ụfọdụ ihe achọrọ maka ịdị mma nke ihe eji arụ ọrụ, ọ bụghị ihe niile bara uru maka nhazi, dị ka ihe dị nro ma ọ bụ nke siri ike, nke mbụ adịghị mkpa maka nhazi, nke ikpeazụ enweghị ike ịhazi.
Mestech na-enye ndị ahịa nrụpụta na nhazi nke akụkụ igwe akọwapụtara. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ozi, biko kpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: CNC machining
Osote: Medical ọgwụ ọgwụ ebu na ịkpụzi
Brass machined Akụkụ
High nkenke machined Parts
Nrụpụta akụkụ machining
Machined Parts Dị Mkpa